KHUAMI AN CELH LO, RALKAP AN KAL HNU AH NAM IN PAHNIH AN THAH VE HNA – The Chinlung Post
Khuaci mui si cang, Ralhrang kawlralkapadirkamh mi hna cungah thihnak le hliamtuarnak tiangachuak cang. Ralhrang kawlralkap dirkamh in thawngpang apetu minung pahnih hna cu namte sawhnak in an nunnak aliam. Cun minung pasarih hliam hma an tuar tiah khuami hna nih an chim. Hi thilacannak hmun cu Swebu pengasimi Tilung khua ahacang mi thilasi.
ရွှေဘိုမြို့နယ် သီးလုံးကျေးရွာတွင် စစ်​ကောင်စီကို ​ထောက်ခံ သတင်း​ပေးခဲ့ပြီး ရွာသားများကို နှိပ်စက်ခဲ့သူများ ဓါးခုတ်ခံရ၊ ၂ ဦး​သေပြီး ၇ ဦး ဒဏ်ရာရ. ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၃၀, စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ​ရွှေဘိုမြို့နယ်၊ သီးလုံး​​ကျေးရွာတွင် အကြမ်းဖက်စစ်​ကောင်စီကို ​ထောက်ခံသတင်း​ပေးခဲ့သူများ ဓါးခုတ်ခံရပြီး ၂ ဦး​သေ ၇ ဦးဒဏ်ရာရရှိ​ကြောင်း ​ဒေသခံများက ​ပြောသည်။ အကြမ်းဖက်စစ်​ကောင်စီက ခန့်အပ်​သော သီးလုံး​ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်​ရေးမှူးကို ရွာသူရွာသားများက လက်မခံ​ကြောင်း၊
ထိုသို့ လက်မခံသဖြင့် နယ်​မြေခံကြံ့ခိုင်​ရေးပါတီ၊ တပ်​ထောက်ခံသူများက စစ်တပ်ကို ​ကျေးရွာသို့ ​ခေါ်ယူခဲ့​ကြောင်း သိရှိရသည်။ အကြမ်းဖက်စစ်​ကောင်စီတပ်များ သီးလုံး​ကျေးရွာသို့​ရောက်ရှိလာပြီး​နောက် ​ကျေးရွာအုပ်ချုပ်​ရေးမှူးကို လက်မခံ​သော ​ကျေးရွာသားများကို ရိုက်နှက် ဖမ်းဆီးခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများ လုပ်​ဆောင်ပြီး ​နေအိမ်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ရိက္ခာနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုယူခြင်းများ လုပ်​ဆောင်သဖြင့် သီးလုံး​ကျေးရွာမှ ပြည်သူများ ရွာလုံးကျွတ် ထွက်​ပြေးခဲ့ရ​ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဧပြီလ ၂၉ ရက်​နေ့တွင် ​ကျေးရွာတွင် တပ်စွဲထား​သော အကြမ်းဖက် စစ်​ကောင်စီတပ်များ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားချိန် ​ကျေးရွာသူ ​ကျေးရွာသားများ ပြန်လည်​​ရောက်ရှိလာပြီး ရွာသားများအ​ပေါ် အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နှင့် ပူး​ပေါင်း၍ ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်သူများကို ဓါးဖြင့် ခုတ်ကြရာမှ ၂ ဦး​သေ၊ ၇ ဦးဒဏ်ရာရရှိ​ကြောင်းသိရှိရသည်။ ဒဏ်ရာရရှိသူ ၇ ဦးအနက်မှ ၃ ဦးသည် အကြမ်းဖက်စစ်​ကောင်စီတပ်များထံ ဆက်သွယ်၍ စစ်​ဆေးရုံများတွင်​ဆေး ကုသမှု ခံယူ​နေသည်ဟု သိရှိရသည်။